अन्त-राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ ? सर`कारले दियो यस्तो जान-कारी.. – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/अन्त-राष्ट्रिय उडान कहिले हुन्छ ? सर`कारले दियो यस्तो जान-कारी..
महा`मारी नरोकिएका कारण अझै तत्काल अन्तराष्ट्रिय उडान नहुने भएको छ । महामारीको चेन ब्रेक गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने भएकाले उडान कायम राखिने भएको हो । भाइ`रस रोकथाम र निय`न्त्रणका लागि अन्त`र्राष्ट्रिय उडानमा लगाइएको रोक कायमै हुने पर्यटन तथा नागरिक उड्ड`यन मन्त्री भानुभक्त ढकालले बताए ।
नयां भेरियन्टको पनि जोखिम थप बढ्दै गएका कारण सो कुरालाई मध्यन`जर गर्दै सरकार तत्काल अन्त`र्राष्ट्रिय उडान नखोल्ने मन|स्थितिमा पुगेको हो ।
परिस्थिति सहज हुँदै गए`पछि सातामा एक दुई उडान थप गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने सोच रहेको उनले बताएका छन् । जोखिम पुरै अन्त्य भएपछि मात्र अन्त`राष्ट्रिय उडान पुरै खोलिने उनले बताए ।
सरकारले अहिले जेठ १७ गते मध्यरात`सम्म अन्त`र्राष्ट्रिय उडानमा रोक लगाएको छ । सरकारले जोखिम कायम रहेका कारण अझै केही समय अन्तराष्ट्रिय उडान नखोल्ने संकेत गरेको छ भने आन्तरिक उडानमा भने अवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्ने देखिएको छ ।
मन्त्री ढकालले आन्त`रिक उडानमा लगाइएको रोक अर्को सूचना जारी नभएसम्म कायमै रहने बताए । अप्ठेरोमा परेका|हरुलाई अहिले चार्टर्ड, उद्धार, कार्गो र कूटनी|तिक उडान नियमित भइरहेका छन् । यस्ता उडान नरोकिने जनाइएको छ । – ताजा खबर